Isnye bụ Theophilus na gịnị mere e ji degara ya akwụkwọ abụọ nke Bible? | EKPERE NA OZI
Thenye bụ Theophilus, gịnịkwa mere e jiri gwa ya akwụkwọ abụọ dị na Baịbụl?
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 28, 2020 Ọgọstụ 28, 2020
Maka ndị anyị gụrụ Luk ma ọ bụ Ọrụ Ndịozi maka oge mbụ, ma ọ bụ ikekwe oge nke ise, anyị nwere ike ịchọpụta na a kpọtụrụ mmadụ aha na mbido, mana ọ dị ka ọ nweghị mgbe ọ pụtara n'akwụkwọ abụọ ahụ. N’ezie, o yighị ka mmadụ ọ̀ dị n’akwụkwọ ọ bụla e dere na Baịbụl.
Ya mere, gịnị mere Luk ji kpọọ nwoke aha ya bụ Theophilus na Luk 1: 3 na Ọrụ 1: 1? Ànyị na-ahụ akwụkwọ ndị yiri nke a na-agwa ndị na-adịghị mgbe ha pụtara akụkọ a ma ọ bụ naanị Theophilus? Gịnịkwa mere na anyị amaghị karịa gbasara ya? Ọ bụrụ na Luk ekpebie itinye ya n’akwụkwọ abụọ dị na Baịbụl, o doro anya na ọ bara uru.
N’isiokwu a, anyị ga-amata ụdị onye Theophilus bụ, ma ọ bụrụ na ọ pụtara na Bible, ihe mere Luk ji gwa ya okwu, na ndị ọzọ.
Onye bụ Theophilus?
O siri ike ịkọtụrụ ihe dị ukwuu banyere mmadụ site n'amaokwu abụọ, nke ọ bụla n'ime ha anaghị egosi ọtụtụ akụkọ ndụ mmadụ. Dị ka e kwuru n'isiokwu a Got Got, ndị ọkà mmụta atụpụtala ọtụtụ echiche banyere ụdị onye Theophilus bụ.
Anyị maara, site na aha e nyere Theophilus, na o nwere ike, dị ka nke ndị ọka ikpe ma ọ bụ ndị gọvanọ nwere. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, mgbe ahụ anyị nwere ike iche na ozioma ahụ ruru ndị nọ n'ọkwá dị elu n'oge mkpagbu nke ụka mbụ, n'agbanyeghị, dịka e gosipụtara na nkọwa na-eso ya, ọ bụghị ọtụtụ ndị isi kwenyere na ozioma ahụ.
Ekwela ka okwu ire uto duhie gị, Theophilus abụghị onye na-echebe Luk, kama ọ bụ enyi, ma ọ bụ dịka Matthew Henry na-atụ aro, nwa akwụkwọ.
Aha Theophilus pụtara "enyi Chineke" ma ọ bụ "onye Chineke hụrụ n'anya". N'ozuzu, anyị enweghị ike ikwupụta n'ụzọ doro anya njirimara Theophilus. Naanị anyị na-ahụ ya nke ọma na amaokwu abụọ, amaokwu ndị ahụ anaghị enye nkọwa zuru ezu banyere ya, na-abụghị eziokwu na o nwere ọkwa dị elu ma ọ bụ ụdị ọkwá dị elu.
Anyị nwere ike iche, site na Luk onye na-agwa ya Oziọma na Akwụkwọ Ọrụ Ndịozi, na ebe ọ kwenyere Oziọma ahụ nakwa na ya na Luk nọ nso. Ha nwere ike ịbụ ndị enyi ma ọ bụ nwee mmekọrịta onye nkuzi na ụmụ akwụkwọ.
Ndi Theophilus odu ke Bible?
Azịza nke ajụjụ a dabere kpam kpam na tiori ị na-ekwu na. Ma oburu na ayi ekwu okwu nke oma, oputagh Theophilus n'onwe ya na Akwukwo nso.
Nke a ọ̀ pụtara na ọ rụghị ọrụ dị mkpa na chọọchị mbụ? Nke a ọ pụtara na ọ kwenyeghị n'oziọma ahụ? Ọ bụchaghị. Paul kwuru banyere ọtụtụ ndị na njedebe nke akwụkwọ ozi ya ndị na-adịghị apụta n'anụ arụ dị ka Ọrụ Ndịozi. N’ezie, akwụkwọ Philemon dum na-edegara nwoke na-abịaghị n’onwe ya n’ihe ndekọ Bible ọ bụla.
Eziokwu ahụ bụ́ na ọ pụtara na Bible, nke nwere ezigbo aha ya, nwere ihe dị mkpa ọ pụtara. A sị ka e kwuwe, ọgaghị nwoke aha ya bara ọgaranya nke gbakụtara azụ azụ na nkuzi Jizọs (Matiu 19).
Mgbe obula onye no na agba ohu nyere aha, ha putara onye nagu ya gakwuru onye ahu maka ule, n’ihi na ha ji anya ha hu ihe. Luk, dị ka ọkọ akụkọ ihe mere eme, jiri nlezianya mee ya n'ụzọ zuru ezu, karịsịa n'Akwụkwọ Ọrụ Ndịozi. Anyị kwesịrị iche na ọ tụfughị ​​Theophilus aha.
Gịnị mere e ji degara Luk na Ọrụ Ndịozi banyere Tiofilọs?
Anyị nwere ike ịjụ ajụjụ a gbasara ọtụtụ akwụkwọ Agba Ọhụrụ nke pụtara na a raara onwe ha nye ma ọ bụ zigara otu onye ma ọ bụ onye ọzọ. E kwuwerị, ọ bụrụ na Bible bụ okwu Chineke, gịnị mere ụfọdụ ndị ode akwụkwọ ji agwa ụfọdụ ndị akwụkwọ ụfọdụ?
Iji zaa ajụjụ a, ka anyị lebagodị anya n’ihe ụfọdụ Pọl kwuru banyere ndị o dere ná ngwụcha akwụkwọ ndị o dere.
Na Ndị Rom 16, ọ na-ekele Phoebe, Priscilla, Aquila, Andronicus, Junia, na ọtụtụ ndị ọzọ. Amaokwu ndị a mere ka o doo anya na Pọl rụụrụ ọtụtụ ndị ọrụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile, n’oge ozi ya. O kwuru otú ụfọdụ n’ime ha si die ụlọ mkpọrọ; ndị ọzọ tinyere ndụ ha n'ihe ize ndụ n'ihi Pọl.
Ọ bụrụ na anyị enyochaa akwụkwọ ndị ọzọ Pọl dere, anyị ga-ahụ otú o si ekele ndị na-ekere òkè n'ozi ya. Offọdụ n’ime ha bụ ụmụ akwụkwọ o nyefere uwe mwụda ahụ. Ndị ọzọ soro ya rụkọọ ọrụ.
N'ihe banyere Theophilus, anyị ga-ewererịrị ụdị ihe atụ a. Theophilus dii kan kaa saa asɛm no kyerɛɛ Luka.
Ọtụtụ ndị nwere mmasị ikwu na ọ bụ onye nlekọta, na-enye ego maka ozi Luk. Ndị ọzọ ekwuola na Theophilus mụtara ihe site na Luk dị ka nwa akwụkwọ. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ, dị ka ndị ahụ Pọl kwuru banyere ha, Luk hụrụ na ọ gakwuuru Theophilus, onye nyere aka n'akụkụ ụfọdụ nke ozi Luk.
Gini mere ndu nke Theophilus ji di nkpa nye ozioma?
A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na naanị anyị nwere amaokwu abụọ gbasara ya, nke ahụ ọ pụtara na ọ nweghị ihe ọ bụla o mere iji kwalite ozi ọma ahụ? Ozo, anyi kwesiri ileba anya na ndi Paul kwuru. Dị ka ihe atụ, a kpọghị Junia aha ọzọ na Bible. Nke a apụtaghị na ozi Junia agaala n’efu.
Anyị maara na Theophilus keere òkè n'ozi Luk. Ma ọ natara nkuzi ma ọ bụ nyere aka maka ego Luke ka ọ na-anakọta akaebe nke ndị ji anya ya hụ, Luk kwenyere na ya tosiri ka e kpọtụ ya aha na Bible.
Anyị nwekwara ike ịmara, site na aha Theophilus, na ọ nwere ọkwá ike. Nke a pụtara na Oziọma ahụ metụtara ọha mmadụ niile. Ọtụtụ ndị ekwuola na Theophilus bụ onye Rom. Ọ bụrụ na onye Rom bara ọgaranya nọ n’ọkwa dị elu nabatara ozi ọma nke ozioma, ọ na-egosi ụdịrị Chineke dị ndụ ma na-arụ ọrụ.
Nke a nwere ike nyekwara ndị nke ụka oge mbụ olileanya. Ọ bụrụ na ndị gburu Kraịst n’oge gara aga dị ka Pọl na ndị isi Rom dị ka Theophilus nwere ike nwee mmasị n’ozi ozioma, mgbe ahụ Chineke nwere ike ịmegharị ugwu ọ bụla.
Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n'aka Theophilus taa?
Ndụ Theophilus bụụrụ anyị ihe akaebe n'ọtụtụ ụzọ.
Nke mbụ, anyị mụtara na Chineke nwere ike ịgbanwe obi mmadụ ọ bụla, n’agbanyeghị ọnọdụ ndụ ma ọ bụ ọnọdụ obodo. Theophilus na-abanye akụkọ ahụ na ọghọm: onye Rom bara ọgaranya. Ndi Rom akporia ozi oma dika o megidere okpukpe ha. Mana dị ka anyị na-amụta na Matiu 19, ndị nwere akụ na ụba ma ọ bụ ọkwá dị elu na-esiri ike ịnakwere ozi ọma n'ihi na n'ọtụtụ ọnọdụ ọ pụtara ịhapụ akụ na ụba ụwa ma ọ bụ ike. Theophilus kasa tia awaregyae.
Nke abuo, anyi matara na obuna obere ndi nwuru anwu nwere ike buru uzo di oke mkpa n’akuko Chineke.Anyi amaghi otu Theophilus siri metuta ozi Luk, ma o mere nke oma iji kpu mkpu n’akwukwo abuo.
Nke a pụtara na anyị ekwesịghị ịdị na-eme ihe anyị na-eme maka ntụpọ ma ọ bụ mmata. Kama, anyị kwesịrị ịtụkwasị obi na atụmatụ Chineke maka ndụ anyị na onye ọ nwere ike itinye n’ụzọ anyị ka anyị na -ekekọrịta ozi-ọma ahụ.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịmụta site na aha Theophilus: "Chineke hụrụ n'anya". Onye ọ bụla n’ime anyị bụ Theophilus n’ụzọ ụfọdụ. Chineke hụrụ onye ọ bụla n’ime anyị n’anya ma nye anyị ohere ka anyị bụrụ enyi ya.
Theophilus nwere ike igosipụta n'amaokwu abụọ, mana nke a apụtaghị ọrụ ya na Oziọma. Agba Ọhụrụ nwere ọtụtụ ndị a kpọtụrụ aha n'otu oge ndị rụrụ ọrụ dị mkpa na chọọchị mbụ. Anyị maara na Theophilus nwere akụ na ụba ụfọdụ na ike yana na ya na Luk nwere mmekọrịta chiri anya.
Na agbanyeghị na nnukwu ma ọ bụ obere ọ rụrụ ọrụ ahụ, a kpọtụrụ ya aha abụọ na akụkọ kachasị ukwuu.
Nke gara aga Post Gara aga post:August 28: ntinye na ekpere Sant'Agostino
Next Post → Post ozo:Chee echiche banyere ndụ gị taa. Mgbe ụfọdụ anyị na-ebu obe buru ibu